Wasiir Xoosh: Dastuurku Waxa Uu Qabyada Ka Baxayaa Inta Aan La Gaarin 2019 – Kalfadhi
Wasiir Xoosh: Dastuurku Waxa Uu Qabyada Ka Baxayaa Inta Aan La Gaarin 2019
Wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda fedraalka ee Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil oo la hadlay warbaahinta Kalfadhi waxa uu sheegay in dastuurka dalka uu qabyada ka bixi doono inta aan la gaarin sanadka 2019-ka.
Waxa uu ku sheegay wasiir xoosh in waxyaabaha xoogga ay saarayaan ay ka mid yihiin fasiraadda qodobbada la isku qabsan karo ama awoodaha hay’adaha aan kala saaraneyn.
Waxa uu sheegay in uu jiro guddi lagu magacaabo “guddiga siyaasadda loo dhanyahay” oo uu hoggaamiyo RW ku xigeenka dalka shaqadooduna tahay in ay xal ka gaaraan is qabqabsi walba oo u dhaxeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goobolleedyada sida qeybsiga kheyraadka, dekedaha, awoodaha iyo canshuuraha.
Waxyaabahaas la xallin doono ayuu sheegay in ay noqon doonaan qeyb ka mid ah dastuurka aan qabyada aheyn ee Soomaaliya ay yeelan doonto.
“Meel fiican ayeey marayaan wax walba, guddiyadii ay quseysana waxaan kala saxiixannay tubtii loo mari lahaa, dhinacyada siyaasadda iyadana waxaan ku rejo weynnahay in xal laga gaaro, wasaaradduna korjoogteyn ayey ku heyn doontaa.” Ayuu yiri wasiir Xoosh.
Waxa uu sheegay in latashiyo badan ay la sameeyeen wasaaradaha maamul gobolleedyada iyo dastuurka isla markaana ay leeyihiin madal ay ku kulmaam saddexdii bilba mar.
Waxa uu sheegay in dib u geesita dastuurka waxyaabaha ay xalka ka gaari doonto ay ka mid noqon doonto nuuca garsoor ee la qaadan doono arrinkaasna ay wasaaradda caddaaladda kawada shaqeyn doonaan.
Halkan ka dhageyso wareysiga wasiir Cabdi Xoosh uu siiyay Kalfadhi.
Sanatar Ayuub: Soomaalida Mareykanka Ku Nool Waxeey Baahi U Qabaan In Laga Qaado Xayiraadda Socdaalka
Maxaa Looga Hadlay Kulankii Koowaad Ee Kalfadhigii Saddexaad Ee Golaha Shacabka